निर्देशक राजमौलीको ‘RRR’ बाट साउथ फिल्ममा आलियाको डेब्यु, साथमा छन् अजय देवगन पनि ! - Experience Best News from Nepal
‘बाहुबली’ फिल्म जस्तो ब्लकबस्टर फिल्म बनाइसकेका निर्देशक एसएस राजमौलीले मल्टिस्टार फिल्म ‘RRR’ निर्माणको घोषणा गरेका छन् । हैदरबादमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशक राजमौलीले फिल्मको घोषणासँगै रिलिज मिति र स्टारकास्टको जानकारी गराएका छन् ।
फिल्मको कहानीको खुलासा गर्दै राजमौलीले भने, ‘यो पूर्ण रुपमा फिक्शन बेस्ड हो । जुन दुई रियल हिरोमा आधारित छ । हामीले ठूलो बजेटमा यो फिल्म बनाउँदै छौं । मलाई सानो बजेडको फिल्म बनाउन मन पर्दैन । सबै कुरा भव्य हुनेछ । धेरै भन्दा धेरै अनुसन्धान गरिएको छ ।’ मेकर्सका अनुसार यो फिल्म ३५०– ४०० करोडको ठूलो बजेटमा निर्माण गरिनेछ ।
यी ७ वलिउड जोडी जसको प्रेम भन्दा बढी ब्रेकअप चर्चामा रहयो
नायिका बाट चलचित्र निर्माण गर्दै आलिया भट्ट
आलियाको फोन र म्यासेजबाट वाक्कदिक्क छन् रणबीर कपुर, के होला त सम्बन्ध ?
Ajay DevganAlia BhattRam CharanS. S. Rajamouli
एसएस राजामौलीको नयाँ सिनेमाको भव्य एक्सनमा १ हजार जनासँग लड्दै रामचरण